Antibiyootik – Barocaafimaad |
Antibiyootikadu waa daawooyin loo isticmaalo in lagula dagaallamo infekshannada kadhasah bakteeriyada. Waxay daaweeyaan caabuqa iyagoo dila ama yareynaya korriinka bakteeriyada.
Antibiyootiggii ugu horreeyay ee casriga ahaa ayaa la isticmaalay sannadkii 1936. Ka hor intaan antibiyootiko lasoo saarin boqolkiiba 30 dhimashooyinka oo dhan waxaa sababi jiray cudurro bakteeriyo ah. Maxaa abaal marin ku guuleystay maskaxdii keentay antibiotics.
Maanta antibiyootikadu weli waa awood waana daawooyinka nafaha lagu badbaadiyo dadka qaba cudurada qaarkood. Waxay sidoo kale ka hortagi karaan infakshannada yar yar ee halista noqon kara.
Waxaa jira noocyo badan oo ah antibiotics ah. Noocyada qaar ee antibiyootikadu waxay u shaqeeyaan qaabab gaar ah ee lagu dilo bakteeriyada.
Antibiyootikadu waxay ku yimaadaan noocyo kala duwan waxaana kamid ah:
Sida sharciga ah waa in daawooyinka antibiyootigga badankood lagu helo oo kaliya warqad dhaqtar
Sidee antibaayootikadu uga shaqeysaa bakteeriyada?
Antibiyootikadu waxay la dagaallamaan infekshanka bakteeriyada iyaga oo dila bakteeriyada ama gaabiya oo joojiya koritaankeeda. Waxayna sameeyaan:
Weerarka derbiga ama xeynndaabka bakteeriyada ku xeeran
Joojinta wax soo saarka borotiinka ee bakteeriyada
Mudo intee le’eg ayay antibiyootiga ku qaadaan kartaa inay shaqeeyaan?
Antibiotikadu waxay bilaabaan inay shaqeeyaan ka dib markaad qaadato si kastaba ha noqotee waxaa laga yaabaa inaadan dareemin inaad ku wanaagsan tahay laba ilaa saddex maalmood.
Sida dhakhsaha badan ee aad ku caafimaadeeso antibiotikadu kadib daaweynta way kala duwantahay. Waxay sidoo kale ku xirant ahay nooca infekshanka aad daaweyneyso.
Inta badan antibiyootiga waa in la qaataa 7 ilaa 14 maalmood. Xaaladaha qaarkood waxay qaadataa daaweynta waqti gaaban. Dhakhtarkaaga ayaa go’aamin doona waqtiga ay qaadan karto daaweyntaada ee ugu fiican oo saxda ah ee antibiyootiga.
Inkasta oo laga yaabo inaad dareentid in aad ku roonaatay dhowr maalmood oo daaweyn ah waxaa ugu fiican in la dhamaystiro dhammaan jeermiska bakteeriyada si aad si buuxda u xallisid xaaladdaada. Tani waxay kaloo kaa caawin kartaa ka hortagga iska caabinta antibiyootigga. Ha joojin antibiyootigaaga hore adigoon marka hore la hadlin dhaqtarkaaga caafimaadka.
Maxaa laga sameeyey antibiyootikada?
Antibiyootigii ugu horreeya ee beta lactam penicillin ayaa lagu ogaadey si shil ah. Waxay ka soo korodhay boorka caaga ah ee Petri ah. Cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in nooc ka mid ah fungus si dabiici ah u soo saaray penicillin. Ugu dambeyntii waxaa la soo saaray tiro badan oo penicillin ah ayadoo lagu soo saaray shaybaar iyada oo loo marayo hab bacrimis ah oo la isticmaalayo fungus.
Qaar ka mid ah antibiyootigyadii hore waxaa soo saaray bakteeriyadii laga helay ciida dhulka.
Maanta dhammaan daawooyinka antibiotikada waxaa lagu soo saaraa shaybaar. Qaarkood waxaa lagu sameeyaa falgal taxane ah oo isku dhafan oo soo saara walxaha daawada loo isticmaalo.
Daawooyinka kale ee antibiyootigyada ugu yaraan qayb ahaan waxaa lagu sameeyaa nidaam dabiiciga ah oo la xakameynayo. Nidaamkan waxaa badanaa la hagaajiyaa falceliska kiimikada ee wax ka bedeli kara walaxda asaasiga ah si loo abuuro daawo kale.
Waa maxay wax yaabaha aysan ka hortagi karin antibiyootigga?
Antibiyootikadu waa dawooyin xooggan oo si fiican ugu shaqeeya noocyada cudurada qaarkood. Si kastaba ha noqotee antibiyootikada qaar wax faa’iido leh maaha markii ay bakteeriyada ay ku badato jirka.
Shaqa gabka antibiyootikadu waxay timaadaa marka bakteeriyadu la kantarooli waayo ama lagu dilo antibiyootikyo gaar ah xaaladaha qaarkood, tani micnaheedu maahan in aysan jirin daaweyn wax ku ool ah oo xaaladaha qaar lagu daweeyo.
Sannad kasta 2 malyan oo qof ayaa qaba bakteeriya aan waxba katarin daawada antibiyootikada taasoo keentay ugu yaraan 23,000 oo dhimasho ah.
Markaad qaadato antibiyootig, bakteeriyada xasaasiga ah waa laga nadiifiyaa jirka. Bakteeriyada ku jirta inta lagu jiro daaweynta antibiyootigga ayaa badanaa u adkaysata daawada antibiyootigga. Bakteeriyadan waxay inta badan leeyihiin sifooyin gaar ah oo ka hortagaya antibiyootigyada.
Qaar ka mid ah infekshannada antibiyootikada u adkeysankara waxaa ka mid ah:
Xanuunka kadhasha nooca bakteeriyadan wuxuu keenaa infekshan labada mindhicirood ee yar iyo kuwa weyn. Tani waxay badanaa dhacdaa kaddib marka qof lagu daaweeyo antibiyootikyo loogu talogalay infekshin ka duwan. C. diff ayaa si dabiici ahaan u adkeysanaya antibiyootiko badan.
Bakteeriyadan waxay badanaa ku dhacdaa dhiig wadeenadaada kaadi mareenka iyo nabarrada ama boogaha qalliinka. Infekshankan wuxuu caadi ahaan ku dhacaa dadka isbitaaiada jiifo. Infakshannada Enterococci waxaa lagu daaweyn karaa antibiyootiko laakiin VRE waxay u adkaysaneysaa daaweynta.
Nooca infekshanka wuxuu u adkeysan karaa antibiyootikada infekshanka caadiga ah ee Staph. Caabuqyada MRSA caadi ahaan waxay ku dhacaan maqaarkaaga. Waxay kubadan yihiinn dadka ku jira isbitaalada iyo kuwa difaaca jirkoodu daciif yahay .
Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae CRE
Falka noocan ah ee bakteeriyadu waxay u adkeysanayaan waxyaabo badan oo antibiotics ah. Infakshanka CRE wuxuu caadi ahaan ku dhacaa dadka isbitaallada iyo kuwa ku jira qalab farsamo-yaqaan ama ay ku jiraan tuubooyin.
Sababta ugu muhiimsan ee caabuqa antibiyootiggu waa isticmaalka aan habooneyn ama xad dhaafka ah ee antibayotics. Inkastoo boqolkiiba 30 isticmaalka antibiyootiga loo maleynayo inaan loo baahnayn. Sababtani waa sababta antibiyootikada inta badan la qoro markii aan loo baahnayn.
Qaar ka mid ah tallaabooyin muhiim ah ayaa loo qaadi karaa si loo yareeyo isticmaalka antibiyootiga aan habooneyn:
U qaado antibiyootikada kaliya cudurada bakteeriyada. Ha isticmaalin antibiyootikada shuruudaha ay sababaan virus yada sida hargab qufac ama dhuun xanuun.
Qaado antibiyootikada sida uu kuugu sheegay dhakhtarkaaga. Isticmaalka qiyaas khaldan inaa kala goyso qaadasha daawada ama qaadashada dheereso ama gaabiso marka loo fiiriyo waxay gacan ka geysan kartaa kahortaga dawada ee infekshinka. Xitaa haddii aad dareento fiicnaan ka dib dhowr maalmood la hadal dhakhtarkaaga ka hor inta aadan joojin antibiotics ka.
Qaado antibiyootig sax ah. Isticmaalka antibiyootig khaldan ayaa sababi karta in bacteria ay la qabsato daawada. Ha qaadan antibiotics loo qoray qof kale. Sidoo kale ha qaadan antibiotics ka ka baxsan daaweyn hore. Bixiyahaaga caafimaad wuxuu awoodi doonaa inuu doorto daawada ugu habboon ee antibiyootigga ee nooca gaarka ah ee infekshankaaga.
Waa maxay antibiyootika loo isticmaalo daaweynta?
Antibiyootikada waxaa loo isticmaalaa daawaynta infakshanka uu keeno bakteeriyada. Mararka qaarkood way adag tahay in la ogaado haddii infekshankaaga uu keeno bakteeriya ama fayrus sababtoo ah astaamaha badanaa waa isku mid.
Bixiyahaaga daryeelka caafimaad ayaa qiimeynaya calaamadahaaga wuxuuna sameyn doonaa baaritaan jireed si loo go’aamiyo sababta keentay cudurkaaga. Xaaladaha qaarkood waxay codsan karaan dhiig ama kaadi si loo xaqiijiyo sababta keentay cudurka.
Caabuqyada bakteeriyada caadiga ah waxaa ka mid ah:
Caabuq sanka iyo dhagaha ah
Antibiyootikadu waxtar uma leh fayraska sida hargabka caadiga ah waxay sidoo kale kama shaqeeyaan infekshannada ay keenaan fangaska sida:
Infekshanka uu keeno qamiir ama waxa loo yaqaan yeast
Infakshanka faraha ama cidiyaha
Kuwani waxaa lagu daaweeyaa koox ka duwan daawooyinka ee loo yaqaan antifungals.
Dhibaatada ay keenaan antibiyootiga
Antibiyootigyada intooda badan waxay leeyihiin waxyeelo isku mid ah. Waxaa laga yaabaa in waxyeellada ugu caansan ay tahay xanuunka caloosha ee loo yaqaan GI oo ay ka mid yihiin:
Xaaladaha qaarkood waxyeellooyinkaas waa la yareyn karaa haddii aad la qaadato antibiyootig cunto. Si kastaba ha noqotee antibiyootigyada qaarkood waa in lagu qaado calool maran ama eber ah. Weydii dhakhtarkaaga ama farmashiistaha habka ugu wanaagsan ee aad u qaadan karto antibiyootiggaaga.
Calool xanuun wuxuu caadi ahaan kaa tagaa markaad joojiso daaweynta haddii aysan taasi ahayn waa inaad wacdaa dhakhtarkaaga.
Wac dhakhtarkaaga haddii aad la kulanto:
Calool xanuun iyo majiir
Dhiig soo raaca saxaradaada
Ku qaadashada antibiotics si waxtar leh
Antibiyootikadu waa kuwa ugu waxtarka badan marka loo isticmaalo si habboon. Tani waxay ka bilaabantaa hubinta in aad dhab ahaantii u baahantahay antibiotic. Isticmaal antibiotics oo kaliya ee uu dhakhtarku kuu qoray si aad u aragto jeermiska bakteeriyada.
Kala hadal dhakhtarkaaga ama farmashiistaha habka ugu fiican ee aad u qaadan karto antibiyootiggaaga. Qaar waa in la qaataa raashin ka kadib si loo yareeyo waxyeelooyinka kale laakiin qaar kale waxay u baahan yihiin in lagu qaado calool baahan.
Antibiyootikada waa in sidoo kale lagu qaataa qaddarka loo qoondeeyey iyo dhererka daaweynta. Waxaa laga yaabaa inaad dareento fiicnaan dhowr maalmood gudahood ka dib markaad bilaabaysid antibiyootig laakiin waa inaad la hadashaa bixiyahaaga daryeelka caafimaadka kahor intaadan joojin daaweyntaada horay.